Parent Dashboard - Bogga Waalidka - Sahanka Waalidka (Somali) Survey
Parent Dashboard - Bogga Waalidka - Sahanka Waalidka (Somali)
Waaxda Waxbarashada Gobolka New York (NYSED) waxay hormarineysaa Bogga Waalidka si ay u kordhiyaan daahfurnaanta oo warbixin ka sameeyaan waxqabadka dugsiga iyo xogta kale ee heerka dugsiga oo u sahlan waaladiinta iyo bulshada inay galaan. Kani waa qeyb ka mid ah Qorshaha New York’s ESSA.
NYSED waxay aruurineysaa jawaab celinta ka imaaneyso waaladiinta iyo daneeyayaasha si ay u jaheyso shaqada hormarinta Bogga Waalidka. NYSED waxay u isticmaaleysaa jawaab celintaan inay ku aqoonsato xogta aadka wax ku oolka ugu leh waaladiinta iyo bulshada.
Fadlan buuxi sahankaan shanta daqiiqo ah oo noo sheeg sida aan uga dhigi karno Bogga Waalidka mid wax ku ool ah oo suurtogal ah.
* 1. Sidee ayaad ku qeexi laheyd nafsadaada? Dooro dhammaan inta ay quseyso.
Waalid ama masuul
U doode waxbarasho
Wax kale (fadlan qeex)
* 2. Halkee ayaad hadeer ka heshaa warbixin ku saabsan dugsiga bulshada deegaankaaga (tusaale ahaan, heerarka qalin jabinta, xogta waxqabadk ardayga, iwm.) ee Gobolka New York? Dooro dhammaan inta ay quseyso.
I-meelada ka imaanayo dugsiga
Waraaqaha dugsiga ka imaadeen (oo dhinaca Adeega Boostada Mareykanka ama guriga lala soo diray ardayga)
I-meelada ka imaanayo degmada
Waraaqaha degmada ka imaadeen (oo dhinaca Adeega Boostada Mareykanka ama guriga lala soo diray ardayga)
Waaxda Waxbarashada Gobolka New York
Warbaahinta bulshada (tusaale ahaan, Facebook, Twitter, iwm.)
U doodaha ama hay’adaha aan faa’ido doonka aheyn
Kama helo warbixin ku saabsan dugsiga bulshada deegaankeyga.
* 3. Maxaa kaa celiyo inaad heshid warbixin ku saabsan dugsiga bulshada ee New York? Dooro dhammaan inta ay quseyso.
Ma garanayo halka laga helo warbixin.
Ma haysto waqti lagu helo warbixin.
Warbixinta la heli karo waa jahwareer oo wax ku ool malahan.
Ma rabo warbixin ku saabsan dugsiyada.
Waxaan haystaa dhammaan warbixinta aan u baahannahay.
* 4. Midkee ka mid ah kuwa xiggo ayay run kula tahay adiga ee wax ku saabsan websaydka kaarka wargelinta dugsiga New York? Dooro dhammaan inta ay quseyso.
Lama socon in warbixintaan jirto.
Ma ogo halka laga helo bogga.
Waxaan isticmaalaa illo kale oo aan ku helo warbixin ku saabsan dugsiga deegaankeyga.
Wax xiiso uma hayo illo noocaan.
* 5. Xog noocee ayaa aad wax ku ool ugu yeelan karto oo kaa caawiyo go'aansashada tayada dugsiga?
Sharaxaadaha nooca xog walba waa la heli karaa.
Fadlan ku buundey kuwa xiggo oo qaabka wax ku oolka (1 = ugu wax ku ool badan):
U xilsaarida la xisaabtanka ESSA
Qadada bilaashka ama qiimaha la dhimay
Aqoonta luuqada Ingiriiska
Kulliyada, Shaqada, iyo Diyaarsanaanta Rayidka
* 6. Markii fiirineysid xogta dugsiga, caawimadee ayaa bixiyo xaalada ugu wax ku oolka badan?
Barbardhiga dugsiga illaa degmada
Barbardhiga dugsiga illaa gobolka
Barbardhiga dugsiga illaa natiijooyinkooda sannad ka hor
Barbardhiga kooxyada hoose ee ardayda ee ku jirto dugsiga (tusaale ahaan, qowmiyada, Ardayda Luuqada Ingiriiska, iwm.)
* 7. Imisa waqti ah ayaad caadi ahaan ku isticmaali laheyd sahminta wargelinta websaydka iyo warbixinta ku saabsan dugsiyada bulshada deegaanka?
Wax ka yar 5 daqiiqo
Ka badan 20 daqiiqo
* 8. Imisa waqti ah ayaad rabtaa inaad ku isticmaashid ku eegida fiidiyo sharaxyo sida loo isticmaalo websaydka cusub ee wadaago xogta dugsiga?
Waxaan ku isticmaali lahaa waqtiga ku daawado tilmaamaha ku saabsan sida loo isticmaalo websaydka.
A daqiiqad ama ka yar.
Ka badan 5 daqiiqo
Waad ku mahadsantahay buuxinta sahanka.
Haddii aad su’aalo qabtid ama faalooyin, fadlan i-meel ku soo dir ParentDashboard@nysed.gov